1 Beresosɛm 26:1-32
26 Apon ano ahwɛfo+ mu nkyekyɛm ni: Korafo+ mu, Asaf aseni Kore ba Meselemia.+ 2 Meselemia mma ni: Sakaria ne abakan, Yediael to so abien, Sebadia to so abiɛsa, Yatniel to so anan, 3 Elam to so anum, Yehohanan to so asia, Elieho-Enai to so ason. 4 Obed-Edom+ mma ni: Semaia ne abakan, Yehosabad to so abien, Yoa to so abiɛsa, Sakar to so anan, Netanel to so anum, 5 Amiel to so asia, Isakar to so ason, Peuletai to so awotwe; Onyankopɔn na ohyiraa no.+ 6 Na ne ba Semaia nso, wɔwoo mma maa no, na wodii wɔn agya fie so efisɛ na wɔyɛ mmarima akokodurufo a wɔn ho yɛ den. 7 Semaia mma ni: Otni, Refael, Obed, ne Elsabad a ne nuanom yɛ mmarima akokodurufo, ne Elihu ne Semakia. 8 Eyinom nyinaa yɛ Obed-Edom asefo, wɔne wɔn mma ne wɔn nuanom yɛ mmarima akokodurufo a wɔwɔ ahoɔden a wɔde yɛ adwuma no, mmarima aduosia abien a wofi Obed-Edom mu. 9 Meselemia+ mma ne ne nuanom yɛ mmarima akokodurufo dunwɔtwe. 10 Hosa a ofi Merari asefo mu mma ni: Abusuapanyin Simri; ná ɔnyɛ abakan+ nanso ne papa de no yɛɛ abusuapanyin;+ 11 Hilkia to so abien, Tebalia to so abiɛsa, Sakaria to so anan. Hosa mma ne ne nuanom nyinaa yɛ dumiɛnsa. 12 Apon ano ahwɛfo nkyekyɛm yi mu no, mpanyimfo no som adwuma te sɛ wɔn nuanom de+ wɔ Yehowa fie adwuma no mu. 13 Enti wɔbɔɔ ntonto+ maa akumaa ne ɔpanyin sɛnea wɔn agyanom abusuafie+ te, kyekyɛɛ apon ano hwɛ adwuma no maa wɔn. 14 Wɔbɔɔ ntonto no, apuei fam de no kodii Selemia+ nsam. Ne ba Sakaria,+ ɔfotufo+ a ɔwɔ nhumu no, wɔbɔɔ ntonto de atifi+ fam de no maa no. 15 Obed-Edom nyaa anafo fam, na ne mma+ no nso nyaa adekora adan no.+ 16 Supim ne Hosa+ nyaa atɔe fam, faako a ɛbɛn Saleket Pon a ɛda aforoe tempɔn ho no; awɛmfo kuw+ biako gyina ha a, na awɛmfo kuw biako nso gyina ha;+ 17 Lewifo baasia wɔ apuei fam; baanan wɔ atifi fam da koro biara; baanan wɔ anafo fam da koro biara;+ na adekora adan+ no ho nso, awɛmfo baanu wɔ ha a, na baanu nso wɔ ha; 18 atɔe ntwironoo no fam nso, baanan wɔ ɔtempɔn+ no so, na baanu nso wɔ ntwironoo no mu. 19 Saa na wɔkyekyɛɛ apon ano ahwɛfo a wɔyɛ Kora asefo+ ne Merari+ asefo no mu. 20 Lewifo no ni: Ahiya na ɔhwɛɛ nokware Nyankopɔn fie akorade+ ne akorade a wɔayɛ no kronkron+ no so. 21 Ladan+ asefo, Gersonfo a wofi Ladan mu; agyanom abusuafie mpanyimfo a wofi Gersonni Ladan mu: Yehieli.+ 22 Yehieli mma Setam ne ne nua Yoel+ na wɔhwɛɛ Yehowa fie akorade+ so. 23 Amramfo, Yisarfo, Hebronfo, ne Usielfo+ mu no, 24 na Mose ba Gersom ba Sebuel+ ne adekora adan no so hwɛfo. 25 Ne nuanom mu no, ne nua Elieser+ ba ne Rehabia,+ ɔno nso ba ne Yesia, ɔno nso ba ne Yoram, ɔno nso ba ne Sikri, ɔno nso ba ne Selomot. 26 Selomot yi ne ne nuanom na wɔhwɛɛ akorade a wɔayɛ no kronkron+ no nyinaa so, nea Ɔhene Dawid+ ne agyanom abusuafie+ mpanyimfo, ne apem apem ne ɔha ha so ahwɛfo, ne asahene no yɛɛ no kronkron no. 27 Akodi+ mu nneɛma ne asade+ na wɔyɛɛ no kronkron sɛ wɔmfa nsiesie Yehowa fie. 28 Biribiara a ɔdehwɛfo+ Samuel ne Kis ba Saul ne Ner ba Abner+ ne Seruia+ ba Yoab+ yɛɛ no kronkron nso ka ho. Biribiara a obiara yɛɛ no kronkron no, wɔde hyɛɛ Selomit ne ne nuanom nsa. 29 Yisarfo+ mu no, Kenania ne ne mma yɛɛ Onyankopɔn fie nnwuma a wɔyɛ wɔ abɔnten+ no; wɔyɛɛ mpanyimfo ne atemmufo+ wɔ Israel so. 30 Hebronfo+ mu no, Hasabia ne ne nuanom, wɔyɛ mmarima akokodurufo+ mpem ahanson; wɔn na wɔdeda Yehowa adwuma ne ɔhene som adwuma ano wɔ Israel nkurow a ɛwɔ Yordan atɔe fam no mu. 31 Hebronfo mu no, Yeriya+ na na ɔyɛ Hebronfo awo ntoatoaso ne agyanom abusuafie panyin. Dawid ahenni afe a ɛto so aduanan+ mu no, wɔhwehwɛɛ wɔn mu, na wonyaa mmarima akokodurufo a wɔn ho yɛ den wɔ Yaser,+ Gilead.+ 32 Ne nuanom yɛ mmarima akokodurufo+ mpem abien ahanson, agyanom abusuafie mpanyimfo.+ Enti Dawid de wɔn totoo Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuw fã+ no ano sɛ biribiara a ɛfa nokware Nyankopɔn som ne ɔhene ho+ no, wɔnhwɛ so.